Masuul ka tirsan maxkamada laascaano iyo Oday dhaqameed lagu dilay Laascaano – SBC
Masuul ka tirsan maxkamada laascaano iyo Oday dhaqameed lagu dilay Laascaano
Wararka ka imaanaya Magaalada Laascaano ee Xarunta Gobolka Sool ayaa ku waramaya in caawa Magaaladaas lagu dilay Gudoomiyihii Maxakamada Rafcaan ee Laascaano Ibraahim Axmed Shire iyo mid ka mid ah odayaasha Degmada oo Magaciisa lagu soo koobay Nuux.
Sida ay warbaahinta SBC u xaqiijiyeen Dad goobjogayaal ah oo diiday in magacooda la sheego sabab amaan dartood ayaa sheegay in Labada qof la dilay salaadii makhrib ka dib kuwaasi oo lagu dilay meel dhinaca koonfureed oo laascaano ku taala.
Ma jirto cid loo qabtay falka dilka ee ka dhacay Magaalada Laascaano waxaana uu dilkan ku biirayaa Dilal isdaba jog ah oo mudooyinkii la soo dhaafay ka dhacay Magaaladaas kuwaasi oo dad rayid iyo masuulyiinba lagu dilay.
Xaalada Magaalada ayaa kacsan Ciidamo ayaa wadooyinka lagu daadiyay kuwaasi oo baritaano iyo howlgalo ka sameyna wadooyinka Magaalada waxaana xaaladan ay cabsi hor leh gelisay dadka halkaas ku nool.
Ma jirto ilaa iyo iminka cid loo qabtay falkan dilka ah ee caawa ka dhacay Magaalada waxaana ka baxsaday goobta dilka kooxihii dilka geystay oo aan la garan Karin tiradooda iyo haybtooda.
Wixii ku so kordha kala soco SBC Online